Fitomboan'ny fahafatesana :: Tafakatra hatramin’ny folo isan’andro ny kaomandina vatam-paty • AoRaha
Fitomboan’ny fahafatesana Tafakatra hatramin’ny folo isan’andro ny kaomandina vatam-paty
Misy foana ny sehatra asa miroborobo na dia ao anatin’ny krizy mihatra aman’aina mihitsy aza ny eto amin’ny firenena. Anisan’ireo mampidi-bola ho an’ireo mpandrafitra amin’izao vanim-potoana izao ny fahamaroan’ireo olona matin’ ny Covid-19. Maharay kaomandy vata efatra ka hatramin’ny folo ireo mpandrafitra izy ireo amin’izany.
Ireo fianakaviana manana havana maty tokony halevina ivelan’ny faritra Analamanga kanefa tsy maintsy hasitrika etsy Anjanahary noho ny fepetran’ny fihiboana no tena mpanjifa. Samy mamaritra ny sarany hivarotany ny vata ireo mpandrafitra saingy tsikaritra fa niha niakatra izany raha oharina amin’ny vidiny teo aloha.
“40 000 ka hatramin’ny 150 000 ariary ny vidin’ny vata tsotra, ankehitriny, raha toa ka nanomboka tamin’ny 30 000 ariary izany teo aloha. Ora roa na telo dia vita ny vata iray, raha tsy tapaka ny jiro. Miankina amin’ny karazan’ny hazo hanaovana azy io sarany io satria niakatra koa ny vidin’ny hazo”, hoy ny mpandrafitra iray etsy Andrefan’Ambohijanahary. Mety hahatratra hatramin’ny 500 000 ariary kosa ny vidin’ny vatam-paty misy haingony.
Tsiahivina fa arahina fepetra manokana hatrany ny fikarakarana an’ireo olona matin’ny Covid-19. Razana voaomana, sady efa voafono lamba sy efa voasitrika ao anaty vata no raisin’ny fianakaviana. Tsy azon’ireo mana-manjo ireo sokafana intsony ny razana mba hialana amin’ny fiparitahan’ny tsimok’aretina. Halevina avy hatrany rehefa vita ny fikarakarana an’ireo antontan- taratasy samihafa.
“Ny mpiasan’ny fahasalamana ihany no mikarakara ny famonosana ka ampilazana mialoha ny havan’ny maty amin’ny fanomanana an’izay zavatra rehetra ilaina, toy ny lamba, ny akanjo, ny vata sy ny sisa. Azon’ireo fianakaviana manana havana maty noho ny antony hafa ankoatra ny Covid-19 kosa ny mikarakara ny razana. Tsy maintsy halevina faran’izay haingana kosa izany vantany vao vita ny antontan-taratasy ho amin’ ny fandevenana”, hoy Rasoanomenjanahary Anjarasoa Maharavo, lehiben’ny sampana serasera eo anivon’ny Birao mahaleo tena misahana ny fahadiovana (Bmh) eto an-drenivohitra, omaly.
Tolotra fifandraisana « 5G » :: Hosazian’ny Artec ny orinasa Telma
Sosialim-bahoaka anaty fihibohana :: Hizaràna vatsy misimisy ireo tokantrano roa hetsy